Health – Candle Myanmar
သတိပြုရန်များ… COVID-19 .
သတိပြုရန်များ… COVID-19 . ကြောက်စိတ်မဝင်ပါနဲ့ စိတ်အေးစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ပါ အဖြစ်အပျက်သဘောကို နားလည်ထားပါ။ ခေါင်းအရမ်းထိုးကိုက်တာ၊ အပူငွေ့ငွေ့နဲ့ စ ဖျားတာဆို သတိဝင်လိုက်ပါတော့။ အဲဒါ စ ကူးရင် ပြတတ်တဲ့ လက္ခဏာပါ။ လုံးဝအပြင်မထွက်ပါနဲ့။ အိမ်ထဲကလူတွေနဲ့ ခွဲနေပြီး mask တပ်ပါ။
ခါးနာ၊ဒူးနာ သူများအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘဲဥပြုတ် ဆေးနည်း
ခါးနာ၊ဒူးနာ သူများအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘဲဥပြုတ် ဆေးနည်း ဘဲဥကို ပွက်နေသော ရေနွေးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနစ်ခန့်ပြုတ်လိုက်ပြီး ဆယ်ယူလိုက်ပါ ။ ဆယ်ယူလိုက်သည့် ဘဲဥကို ပန်းကန်လုံးထဲကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါ ။စားကောင်းစေရန် သကြားအနည်းငယ် သင် စားကောင်းစေလောက်သည့် အနေအထားသို့ထည့်ပြီး ခေါက်စားလိုက်ပါ ။ တခြားမည်သည်
ရေနွေးကြမ်း စွဲသောက်ခြင်းနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ကျောက်တည်ခြင်း အန္တရာယ် ဆီး လမ်းကြောင်းမှာ ကျောက်တည်ခြင်းရဲ့ အစဟာ ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်ဖြစ်စေမယ့်အရာလေးတွေ အနည်ထိုင်စုစည်းရာက စပါတယ်။ ဆီး ကောင်းကောင်း မသွားနိုင်တဲ့အခါ ဆီးကျောက်တည် လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဆီးထဲမှာ သတ္တုဓါတ်တွေ များနေပြီး တခြားဓါတ်တွေ
ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ် (၈)ရပ်
ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ် (၈)ရပ် ၁. ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့်။ ထမင်းစားပြီးနောက် စီးကရက် ၁-လိပ်သောက်ခြင်းသည် သာမန် အချိန် စီးကရက်၁၀-လိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ညီ မျှပြီး၊ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာပိုများကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင် များက သတိပေးထား သည်။ ၂.
ဝိတ်ချနေချိန်မှာ ဗိုက်မဆာအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်နည့် နည်းလမ်းများ
ဝိတ်ချနေချိန်မှာ ဗိုက်မဆာအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်နည့် နည်းလမ်းများ Diet လုပ်ခြင်းက အလွန်ကိုခက်ခဲပြီး အချိန်ကုန်စေတဲ့အပြင် မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ဗိုက်ဆာခြင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာယခုအချိန်မှာ Diet ပြုလုပ်နေသူတစ်ဦး ဆိုရင်တော့ သတင်းကောင်းရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စားသောက်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းတွေကို အောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ကြ ရအောင်နော်။